I-Semalt Expert: Ubungqina obumangalisayo ngaphandle kwegama elingundoqo
Xa kuziwa kumanqaku kunye nomxholo wewebhu, abantu abahlukahlukeneyo bakholelwa ukuba i-SEO yinto yonke malunga nokugxilwa kwegama elingundoqo. Qinisekisa ukuba umxholo owubhalayo ukhululekile kumagama akwii-reparative kunye namazwi angenanto. Ngaphezu koko, iincwadana ezithandekayo ziya kukukhokelela apho, kwaye akufanele uhambe kunye naso ngenxa ye injini yosesho .
UMichael Brown, u-12 (Semalt uMphathi weNtuthuko yomThengi, ukhumbuza ukuba ufanele uhlale ukhumbule ukuba igama eliphambili lokugxila akuyi kukukhokelela naphi na. Endaweni yoko, ukubandakanya kunye nokuncedisa umxholo kuphela kwindlela iwebhusayithi ikwazi ukusinda ixesha elide - reinigung rapperswil jona. Ukuba udidekile malunga nendlela yokuphucula umxholo onokufumaneka kwi-intanethi nakumajelo asekuhlaleni, le yindawo efanelekileyo kuwe.
Kufuneka uve ngeziko likarhulumente, abakhi beenkcukacha, kunye nabathengisi abathanda ukuthetha nge-SEO. Umxholo ofumanekayo luhlobo lomxholo owenza iindwendwe ezininzi ngexesha. Xa kuziwa kumxholo ofumanekayo, akudingeki ukuba uhlule iinjinjini zokukhangela kwiwebhusayithi yakho nakwiimidiya zentlalo. Kunoko, kufuneka ugxile ekudaleni iiwebhusayithi ezifumanekayo namanqaku asebenza kuzo zonke iintlobo zabasebenzisi kwaye anokufumana imali eninzi kwi-intanethi.
Kufuneka ugxininise kwiintlobo ezintathu zezivakalisi: abaphulaphuli bakho beewebhusayithi, onokuzibandakanya ngeendaba zoluntu, kunye nomnye oza kufumana umxholo wakho ngokusebenzisa imibuzo yerinki ngokukhangela ngeGoogle..
Xa kuziwa ekutheni uthethe nabemi, unokwenza umxholo oza kufikelela kulindeleke. Kodwa ukuba ufuna ukwandisa inethwekhi yakho, kufuneka uqinisekise ukuba umxholo wakho uthatha iindwendwe zangempela, kunokuba i-bots. Ukuba ubhala umxholo onokufumaneka ngaphandle kwegama elingundoqo, uya kubona ukuba abantu abaninzi baya kuthanda ukutyelela indawo yakho kubini kwiijini zokukhangela kunye newebhusayithi yezobuntu.
Enyanisweni, uhambo lweendwendwe luyinkimbinkimbi kunomboniso wethelevishini, ukuprinta iintengiso, iimveliso onokubelana ngazo kwi-Facebook, kunye neziphumo zeinjineli zokukhangela. Kufuneka uhlale ukhangele amaphepha abandakanyeka kakhulu kwaye uqinisekise ukuba abaphulaphuli bakho bafana.
Kubonakala ukuba ininzi yamaphuzu okuthintela malunga neenjini zophando kunye ne-SEO. Ngoko, nangona ubeka amaninzi amagama angundoqo, ayinakuyenza ingqiqo kubantu abathile kwi-intanethi.
ii-URL zomxholo kunye nokucacisa:
Indawo ye-resource identifier (i-URL) yinto yokuqala kunye neyona nto ibalulekileyo kwimixholo yakho yewebhu. Yilapho abaphulaphuli bakho baya kufika khona kwaye baya kufunda izinto ozibhalileyo. Qiniseka ukuba i-URL yakho icacile kwaye iqulethe igama elingundoqo. Akukho mfuneko yokufaka amaninzi amagama angundoqo ngaphakathi kuyo. Kwi-SEO yesibini, ezininzi iingcali zithi kufuneka wenze i-URL ibe mfutshane kwaye iphelele. Ngenxa yoko, unokusebenzisa i-URL yokunciphisa iinkonzo.
Iintloko zakho kufuneka zibe ngabafundi, kungekhona wena. Ii-SEO ezahlukeneyo azivumelani neentloko ze-H1, zithi ayinayo impembelelo emihle kwi-Google rankings. Ngakolunye uhlangothi, ezinye ii-SEO zithi izihloko zibaluleke kakhulu kwaye zishiya umphumo ongunaphakade kwi-SEO yesayithi lakho.